Barashada VISTA-tayada, Cory Georgopoulos - Cunnooyinka Lugaha
Helitaanka barashada VISTA, Cory Georgopoulos
Cory Georgopoulos waa AmeriCorps VISTA xubin ka ahaa kana shaqeynayey Metro Meals on Wheels illaa bishii Ogosto ee la soo dhaafay. VISTA (Volunteers In Service To America) waa barnaamij ay xubnuhu hal sano ka go'an tahay inay ka shaqeeyaan mashruuc gaar ah oo ka socda urur aan faa'iido doon ahayn ama hay'ad dawladeed.
Ujeedada xubnaha VISTA waa inay siiso kaalmo daaha gadaashiisa ururada si looga caawiyo inay dhisaan xasiloonida ururada. Cory waxay dooratay inay xubin ka noqoto VISTA maxaa yeelay waxay dooneysaa inay diirada saarto adeega bulshada, dib u bixinta, sidoo kale waxay xiiseyneysaa la shaqeynta ururada samafalka ah.
Intii ay ku jirtay Metro Meals on Wheels Cory waxay ka shaqeysay sidii loo heli lahaa softiweer siiya tababaro khadka tooska ah ee tabaruceyaasha, iyo sidoo kale meel ay jadwal ugu sameyn karaan is-beddelka iskaa wax u qabso. Waxay ku guuleysatay raadinta barnaamijkan, waxayna sheegtay inay qalab weyn u tahay mutadawiciinta. Cunnooyinka Wheels on Wheels mutadawiciinta ayaa dhawaan arki doona faa'iidooyinka shaqada Cory ee mashruucan!
Cory waxay sheegtey in waayo aragnimadeeda ku saabsan Cuntada Lugaha la dhigto ay aheyd mid wanaagsan, ayna ku faraxsan tahay go'aankeeda ah inay halkaan ka shaqeyso. Waxay ku riyaaqday barashada waxyaabo cusub, waxayna sidoo kale qaddartay mas'uuliyadda loo siiyay iyada oo ah xirfad-yaqaan da'yar.
Markay sanadkeedu yahay 'Metro Meals on Wheels' dhammaato waxay qorsheyneysaa inay dhigato dugsiga sare ee siyaasadda guud, ayna suurtagal tahay inay ka shaqeyso arrimaha socdaalka. Mustaqbalka fog waxay rabtaa inay shaqo ka hesho adeegga bulshada, - iyadoo ku taageeraysa arrin wanaagsan. Way ku mahadsan tahay inay fursad u heshay inay ka shaqeyso meel sida Cuntooyinka Lugaha Lugta, halkaas oo ay ku ogtahay shaqada ay qabaneyso inay leedahay saameyn toos ah oo waarta.
Thanks to Cory oo u hibeeyay sanadkeedii xubin VISTA ee Cuntada Lugaha!
28 Abriil, 2016